आखिर उत्तर कोरियाली शासक किम जोङको अवस्था के छ, अनी कहाँ छन् उनी ? – Kadar News : Oneline Digital News:
आखिर उत्तर कोरियाली शासक किम जोङको अवस्था के छ, अनी कहाँ छन् उनी ?
प्रकासित : १४ बैशाख २०७७, आईतवार २२:४५
उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उनबारे पछिल्लो समय विभिन्नखाले समाचार आएका छन्। केहीले उनी बिरामी परेको भनेका छन् भने केहीले मुटुसम्बन्धी समस्याका कारण उनको मृत्यु भइसकेको हल्ला पनि चलाएका छन्। ९ वर्षअघि आणविक शक्ति राष्ट्रको बागडोर सम्हालेका ३६ वर्ष हाराहारीका किमलाई के भएको हो? अहिलेसम्म उत्तर कोरियाले औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरेको छैन।
अप्रिल १५ मा मनाइने उनका दिवंगत हजुरबुवा किम जोङ सङको जन्मजयन्ति कार्यक्रममा किम जोङ उन अनुपस्थित भएपछि उनी कहाँ छन् भन्ने चर्चा सुरू भएको हो। उत्तर कोरियामा सङको जन्मजयन्तिलाई निकै महत्वपूर्ण दिन मानिन्छ। सत्तामा आएदेखि किमले कुनै पनि वर्ष यो दिनको कार्यक्रम छुटाएका थिएनन्। सङले कोरिया छुट्टिएर उत्तर र दक्षिण कोरिया बनेपछि उत्तरमा आफ्नो शासन सुरू गरेका थिए। उनको मृत्युपछि उनका छोरा किम जोङ इल शासक बने। सन् २०११ इलको मृत्यु भएपछि उन कलिलो उमेरमै उत्तर कोरियाको नयाँ नेता बनेका हुन्।
‘केही न केही नराम्रो भएको छ,’ डेली एनकेले भनेको छ,‘जबसम्म उत्तर कोरिया सरकारी सञ्चारमाध्यमले किमको स्वास्थ्य अवस्था के छ र उनी कहाँ छन् भन्नेबारे औपचारिक जानकारी दिदैनन् उनकाबारे विभिन्न हल्लाहरू चलिरहन्छन् र अनिश्चितता जारी रहन्छ।
सन् २०१८ मा दक्षिण कोरियामा भएको ओलम्पिकमा उत्तर कोरियाली टोलीको नेतृत्व गर्दै सहभागी भएपछि कतिपय मिडियाले उनलाई अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पकी छोरी इभान्का ट्रम्पसँग तुलना गरेका थिए। त्यसपछिमात्रै अन्तर्रा्ष्ट्रिय मिडियामा उनको चर्चा हुन थालेको हो। ट्रम्प र उनबीच भियतनामको होनाईमा भएको शिखर वार्तामा जोङले आफ्ना दाजुलाई सघाइरहेको देखिन्थ्यो।
किमका सौतेनी दाइ किम जोङ नामको तीन वर्षअघि मलेसियाको विमानस्थलमा हत्या गरिएको थियो।